Iikhowudi zokuziphatha - iSichuan Aixiang Technology Co., ltd.
Ingqesho nendawo yokusebenzela
Amathuba alinganayo engqesho / ucalucalulo
Siyakholelwa ekubeni yonke imigaqo nemiqathango yengqesho kufuneka isekwe kubuchule bomntu bokwenza lo msebenzi hayi kwisiseko seempawu okanye iinkolelo. Sinika abasebenzi indawo yokusebenza engenakucalulwa, ukungcungcuthekiswa, ukoyikiswa okanye ukunyanzelwa okunxulumene ngqo okanye ngokungathanga ngqo ngobuhlanga, inkolo, ukuthanda isini, umbono wezopolitiko okanye ukukhubazeka.
Asisebenzisi nayiphi na intolongo, ikhoboka, ukunyanzeliswa okanye ukunyanzeliswa ekwenzeni nayiphi na imveliso yethu.
Asisebenzisi umsebenzi wabantwana kwimveliso yayo nayiphi na imveliso. Asiqeshi namnye umntu ongaphantsi kweminyaka eli-18, okanye ubudala obugqityiweyo esikolweni, nokuba ngowuphi omkhulu.
Sigcina iiyure zomsebenzi ezifanelekileyo ngokusekelwe kwimida yexesha eliqhelekileyo kunye nexesha elingaphezulu elivunyelwe ngumthetho wasekhaya, okanye apho umthetho wasekhaya ungazilinganiseli iiyure zomsebenzi, iveki yokusebenza rhoqo. Ixesha elongezelelekileyo, xa kukho imfuneko, lihlawulwa ngokupheleleyo ngokomthetho wasekhaya, okanye kwinqanaba elilingana ubuncinane nenqanaba eliqhelekileyo lembuyekezo yeyure ukuba akukho mali yipremiyamu imiselwe ngokusemthethweni. Abaqeshwa bavunyelwe ukuba baphume iintsuku ezifanelekileyo (ubuncinci usuku olunye kwiintsuku ezisixhenxe) kwaye bashiye amalungelo abo.
Ukunyanzelwa kunye nokuhlukunyezwa
Siyalivuma ixabiso labasebenzi bethu kwaye sibaphatha ngesidima nembeko umqeshwa ngamnye. Asisebenzisi iindlela ezikhohlakeleyo nezingaqhelekanga zoluleko ezifana nezisongelo zobundlobongela okanye ezinye iindlela zokuhlukumeza ngokwasemzimbeni, ngokwesondo, ngokwasengqondweni okanye ngamazwi okanye gadalala.
Siyabahlawulela ngokufanelekileyo abasebenzi bethu ngokuthobela yonke imithetho esebenzayo, kubandakanya imithetho emincinci yemivuzo, okanye umvuzo wecandelo lendawo, nayiphi na ephezulu.
Sigcina indawo ekhuselekileyo, ecocekileyo nenempilo ngokuthobela yonke imithetho nemigaqo esebenzayo. Sinikezela ngamayeza afanelekileyo, izindlu zangasese ezicocekileyo, ukufikelela emanzini aselwayo, iindawo ezikhanyisiweyo nezifumana umoya, kunye nokukhuselwa kwizinto eziyingozi okanye iimeko. Imigangatho efanayo yezempilo nokhuseleko isetyenziswa nakweyiphi na indlu esiyibonelela kubaqeshwa bethu.
Siyakholelwa ukuba luxanduva lwethu ukukhusela okusingqongileyo kwaye sikwenza oku ngokuthobela yonke imithetho nemigaqo esebenzayo yokusingqongileyo.
Ngumgaqo-nkqubo wethu ukuthintela abasebenzi ukuba bangene kwiintengiselwano ezibuthathaka - ukujongana neshishini ngokubanzi kuthathwa njengokungekho mthethweni, okuziphatha kakubi, okungekho sikweni okanye ukubonisa kakubi ukuthembeka kweNkampani. Le ntengiselwano ihlala iza ngohlobo lokunyoba, izithintelo, izipho zexabiso elibalulekileyo okanye umvuzo othe wanefuthe elincomekayo kwisigqibo esichaphazela ishishini lenkampani okanye inzuzo yomntu.
Siyabathintela abasebenzi ekufumaneni, ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nayiphi na into enexabiso njengembuyekezo yokusebenzisa okanye yokuvuma ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuze kungenelwe omnye umntu. Kwangokunjalo, ukunyoba ngokuthengisa, ukukhaba imali, izipho kunye nezinye iintlawulo kunye nezibonelelo ezihlawulwa kuye nawuphina umthengi azivunyelwanga. Nangona kunjalo, oku akubandakanyi inkcitho yemali efanelekileyo yokutya kunye nokuzonwabisa yabathengi ukuba ngaba isemthethweni, kwaye kufuneka ibandakanywe kwiingxelo zeendleko kwaye yamkelwe phantsi kweenkqubo zeNkampani.
Ulawulo lweeNkcazo, iiNkqubo kunye neeRekhodi
Sigcina ngokuchanekileyo iincwadi kunye neerekhodi zazo zonke izinto ezenziwayo kunye nokuhanjiswa kwee-asethi zethu njengoko kufunwa ngumthetho, kunye nokugcina inkqubo yolawulo lobalo lwangaphakathi ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nokwanela kweencwadi kunye neerekhodi zethu. Siqinisekisa kuphela ukuba intengiselwano enemvume efanelekileyo yolawulo iyaxelwa kwiincwadi zethu nakwiirekhodi.
Ukusetyenziswa kunye nokuBhengezwa koLwazi lwangaphakathi
Sikuthintela ngokungqongqo ukubhengezwa kwemathiriyeli yolwazi lwangaphakathi kubantu abaphakathi kwenkampani abanezikhundla ezichasayo ukufikelela kulwazi olo. Ingcaciso engaphakathi kuyo nayiphi na idatha engakhange ibhengezwe esidlangalaleni.
Ulwazi oluyimfihlo okanye lobunini
Sithatha inkathalo eyongezelelweyo ukugcina ukuthembela kwabathengi bethu nokuzithemba kuthi. Ke, siyabathintela abasebenzi ekuchazeni ulwazi oluyimfihlo okanye lobunini ngaphandle kweNkampani olunokuba yingozi kubaxumi bethu, okanye kwiNkampani uqobo. Olu lwazi lunokwabelana kuphela nabanye abasebenzi ngokufuna ukwazi.
Siqulunqe umgaqo-nkqubo wethu wokuphelisa ukungavisisani phakathi komdla wabasebenzi kunye neNkampani. Kuba kunzima ukuchaza into eyenza ungquzulwano lomdla, abasebenzi kufuneka babe novakalelo kwiimeko ezinokuphakamisa imibuzo enokubakho okanye ebonakalayo yengxabano phakathi kwezinto zomntu kunye neenkampani. Ukusetyenziswa kwepropathi yeNkampani okanye ukufumana iinkonzo zeNkampani ngenjongo yokuzizuzela kunokubangela ukungqubana kwemidla.
Urhwaphilizo kunye nezitenxo ezifanayo
Sithintela ngokungqongqo nayiphi na into yobuqhetseba enokwenzakalisa abathengi kunye nabanikezeli beenkonzo zethu, kunye neNkampani. Silandela iinkqubo ezithile ezimalunga nokwamkelwa, ukunika ingxelo kunye nokuphanda ngayo nayiphi na into enjalo.
Ukubeka iliso kunye nokuthotyelwa
Samkela inkqubo yokujonga iqela lesithathu ukuqinisekisa ukuthotyelwa kweNkampani kulo Mgaqo wokuZiphatha. Imisebenzi yokubeka iliso inokubandakanya ukubhengezwa nokuvavanywa kwendawo yokuhlola, ukuphononongwa kweencwadi kunye neerekhodi ezinxulumene nemicimbi yengqesho, kunye nodliwanondlebe lwabucala nabasebenzi.
Ukuhlolwa kunye namaxwebhu
Sinyula igosa lethu elinye okanye ngaphezulu ukuba lihlole kwaye liqinisekise ukuba iKhowudi yokuZiphatha yenkampani iyajongwa. Iirekhodi zesi siqinisekiso ziya kufikeleleka kubasebenzi bethu, iiarhente, okanye umntu wesithathu xa uceliwe.
Silandela ngokungqongqo kwaye siyawahlonipha onke amalungelo ePropati yeNgqondo ngexesha lokuqhutywa kweshishini lethu kwihlabathi nakwiimarike zasekhaya.